साइबर अपराधको निशानामा गृहिणी र बालबालिका ! « Janata Samachar
साइबर अपराधको निशानामा गृहिणी र बालबालिका !
काठमाडौं टोखाकी २४ वर्षीया नाम परिवर्तित–कमला, सम्पन्न परिवारकी सदस्य हुन् । डेढ वर्षअघि बुढानीलकण्ठका ३३ वर्षीय सुमन रेग्मीसँग समाजिक संजाल फेसबुक मार्फत चिनाजानी भयो । उनीहरुबीचको प्रेम सम्बन्ध यसरी प्रगाढ हुंदै गयो कि राजधानीका डान्स क्लब र बार धाउनेदेखि घुम्न जाने कुरा उनीहरुका लागि सामान्य भइसकेका थिए । त्यसरी झांगिदै गएको उनीहरुबीचको प्रेम शारीरिक सम्बन्धसम्म पुग्यो । दुईबीच निकटता बढेसँगै कमलाको परिवारको सम्पत्तिमा सुमन रेग्मीको नजर पर्यो । युवतीबाट पैसा हात पार्न सके मालामाल हुने लोभमा उनी अपराध गर्न पनि पछि परेनन्, जसले रेग्मीलाई अहिले प्रहरी हिरासतमा पु¥याएको छ । युवतीको आर्थिक अवस्था जानेपछि उनले शारीरिक सम्बन्ध राखेका बेलाका अन्तरंग तस्वीर र भिडियो खिचे । अन्तरंग तस्वीर खिचेको केही समयपछि युवतीले सोच्नै नसोचेको कुराको सामना गर्नुप¥यो । पीडित कमलाका अनुसार एउटा अपरिचित आईडीबाट आएको ‘म्यासेज रिक्वेस्ट’ खोलेर हेर्दा ब्वाइफ्रेण्डसँगको नग्न तस्वीर र भिडियो देखियो । त्यसपछि छाँगाबाट खसेझैँ भएकी उनले आफूले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने गरेको प्रेमी रेग्मीलाई नै यो खबर सुनाइन् । तर रेग्मीले कसरी तस्वीर र भिडियो तेस्रो व्यक्तिसँग पुग्यो भनेर अनभिज्ञता प्रकट गर्दै टार्दै गए । त्यसपछि विस्तारै कमलालाई ति फेक फेसबुक आइडीबाट ब्याकमेल हुन थाल्यो । ती व्यक्तिले ७० लाख दिए भिडियो, तस्वीर हटाउन र पीडकलाई पक्राउ गराउनसमेत सहयोग गर्ने उनकी प्रेमी भनिएका रेग्मीले बताए । लामो कुराकानीपछि युवती रकम दिन राजी पनि भइन् तर, पटकपटक गरेर दिने प्रस्ताव राखिन् । सुरुवातमा २ लाख ४५ हजार रुपैयाँ ती व्यक्तिले भनेकै खातामा पठाइदिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । त्यसपछि पनि पटक–पटक उनीसंग पैसाको बार्गेनिङ हुनथालेपछि कमला आफन्तको सहयोग लिई साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिन पुगिन् ।
ब्युरोमा जाहेरी परेसँगै गोप्यरुपमा प्राविधिक अनुसन्धान सुरु भयो । साइबर ब्यूरोका प्रमुख एसएसपी नविन्द अर्यालका अनुसार दुवै आईडीमा प्रयोग भएका इमेलका आधारमा अनुसन्धान गर्दै जांदा अनुसन्धान एउटा इमेलको लोकेशन रेग्मीको अफिसमा जोडियो । र रेग्मीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा उनले आफ्नो कर्तुत स्वीकार गरे ।
यस्तै अर्को साइबर क्राइसंग सम्बधीत घटना हो – गएको साउन २५ गते काठमाडौंको गंगबुमा भएको हत्या घटना । जसले प्रहरीको मात्रै होइन सबैको दिमाग नै हल्लाइदियो । गंगबुको गणेस्थान नजिक सुटकेशमा टाउको नभएको शव फेला परेपछि प्रहरी समेत झस्किएको थियो । टाउको फेला परेपछि शवको सनाखत गर्न प्रहरीलाई सहज भयो । दाङका कृष्णबहादुर बोहोरा चितवनकी कल्पना मुडभरी पौडेलबीच चलेको अवैध सम्बन्ध र साइबर अपराधका कारण हत्या भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आयो । दाङका कृष्णबहादुर र चितवनकी कल्पनाबीच सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत नै चिनजान भएको थियो । फेसबुकमा कुराकानीकै क्रममा दुबैजनाबीच प्रेमसम्बन्ध भयो । त्यसपछि उनीहरुबीच शारिरिक सम्बन्ध पनि भयो । तर पछि कृष्णबहादुर कल्पनासँगको अन्तरंगको तस्बिर फेसबुकमा पोष्ट गर्दै उनलाई मानसिक तनाब दिएको देखिन्छ । त्यसपछि दुइजनाबीच सम्बन्धमा केही फाटो आयो र एकदिन गत साउन २५ गते कल्पनाले कृष्णबहादुरलाई संगै बस्ने रमाइलो गर्ने भन्दै गंगबु गणेस्थाननजिकै आफ्नो डेरामा बोलाइन् । दुबै जना राती बसेर मदिरा सेवन गर्न थाले त्यहीबेला कल्पनाले कृष्णबहादुरलाई मदिरामा निद्रा लाग्ने औषधी घोलेर पिउन दिएन् । सिलपिङ ट्याप्लेट मिसाइएको रक्सी सेवन पछि कृष्णबहादुर बेहोस भए त्यही बेला कल्पनाले उनको अन्डकोषमा ह्याम्बरले हानेर हत्या गरिन् त्यसपछि उनले शवलाई टुक्रा–टुक्रा पारी सुटकेशमा राखेर ज्यान र टाउको अलग–अलग पारेर बाटोमा फालेका प्रहरीसंग बयान दिएकी थिइन । कल्पनाले आफ्नो नग्न तस्बिरहरु फेसबुकमा हालेर बेइजत गर्न थालेको,ब्याकमेलिङ गर्न थालेको र त्यसले आफ्नो इज्जतमाथि खेलबाड गरेको कारण कृष्णबहादुरको हत्या गरेको बयान दिएकी थिएन् ।
त्यस्तै अर्को घटना हो – ओखलढुंगा जिल्लाको । ओलखढुंगा जिल्लाको चम्पादेवी गाउँपालिका–१० की १६ वर्षीया गोमा कार्कीलाई त्यसै ठाउँका युवराज कार्कीले नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर उनको चरित्र हत्या गरे । युुवराजले गोमाको फोटो राखेर ‘सबैको बुढी म’ भन्ने नाम राख्दै बनाएको फेसबुक आइडी चलाएर उनको चरित्रहत्या गरेका थिए । जुनकुरालाई उनले सहन नसकेर गोमाले घरकै कोठामा पासो लगाएर आत्महत्या गरेकी थिइन् । आत्महत्या गर्नुअघि ‘मेरो फेक आइडी बनाएर मलाई बदनाम गराउनेलाई कारबाही गरे मात्र मेरो आत्मालाई शान्ति मिल्नेछ’ भनेर लेखिएको सुसाइड नोट फेला परेको थियो ।
हो,यी त भए साइबर क्राइमका प्रतिनिधी घटनाहरु । सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न बाहनामा ठगिनेको लिस्ट छोटो छैन । तर, यस्ता घटनाको दर्ता नत सबै जिल्लामा नै हुन्छन् न त यसको कार्वाही प्रक्रिया नै त्यति सजिलोे छ । बैदेशिक रोजगारीको आश्वासन दिनेहरुदेखि अनेकौं ब्लाकमेल गर्नेहरु पनि सक्रिय छन अहिले ।
के हो साइबार क्राइम ?
विद्युतीय उपकरणहरू कम्प्युटर, मोबाइल तथा सञ्चारसञ्जालको प्रयोग गरेर हुने कुनै पनि किसिमका आपराधिक कार्यलाई साइबर अपराध भनिन्छ । सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा कानुनद्वारा निषेधित इन्टरनेट सम्वन्धीत दुरुपयोग वा अपराधहरू नै साइबर अपराध हो । इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, इन्टरनेट धोकाधडी, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी गरी गरिने बैंकिङ कसुर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पुर्याडउने क्षति लगायतका अवैधानिक कार्यलाई पनि साइबर अपराध मानिन्छ ।
कस्ता–कस्ता व्यक्तिहरु संलग्न छन् साइबर क्राइममा
मुख्यगरी अहिले गृहिणी र बालबालिका साइबर अपराधको शिकार बनेका छन् । साइबर ब्यूरोका अनुसार हालसम्म २१ बर्षदेखि ३५ बर्षसम्मका ६५ प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत १८ बर्ष मुनिका बालबालिका बढी प्रभावित छन् । साइबर ब्युरोका पछिल्ला ३ बर्ष यताका तथ्याङकलाई हेर्ने हो भने आर्थिक बर्ष २०५७–७६ मा ५ जना,आर्थिक बर्ष २०७६–७७ मा १६ जना बालक र ८८ जना बालिका,र आर्थिक बर्ष २०७७–७८ पुषसम्म १६ बालक र ४८ गरी जम्मा ३२ जना बालक र १ सय ४१ बालिका गरी जम्मा १ सय ७३ जना बालबालिका साइबर क्राइमको सिकार भएका छन् ।
उनीहरु सबै १८ बर्ष मुनिका हुन । यसमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, ह्याकिङ, ठगी,चरित्र हत्या,लगायतका घटना छन् । यसमा १५ वर्षका बालक समेत पीडक छन् । भने अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा हालसम्म १ हजार ५ सय ६७ वटा साइबर क्राइम सम्बन्धी उजुरी परेका छन् ।
साइबर ब्यूरो स्थापनापछि हालसम्म ७२ वटा साइबर क्राइम सम्बन्धी मुद्धा दर्ता गराएको ब्यूरोको तथ्याङ्क छ ।